Shotcretre - Henan Dhuxul Research Keming Farsamada Co., Ltd.
Shotcretre codsiga / Guunii
Shotcrete, Guunii ama la taaban karo lagu buufiyaa waa la taaban karo ama hoobiye gaadhsiiyey iyada oo tuubo iyo pneumatically saadaaliyey ee xawaaraha sare u gal dusha ah, sida farsamada dhismaha ah. Waxaa caadi ahaan xoojinay by dhengedihii caadiga steel, mesh bir, ama macdantaa.
Shotcrete sida caadiga ah waa erey loo dhan yahay, waayo, labadaba-darka qoyan iyo qalalan-darka versions. In dhismaha pool, si kastaba ha ahaatee, shotcrete loola jeedaa qoyso isku darka iyo Guunii si ay u qalalaan isku darka. Macnaha halkan, shuruudahan ma aha laysku beddelid karo.
Shotcrete la dhigayaa iyo is dulfuulan waqti isku mid ah, ay sabab u tahay ciidamada la biiyaha ah. Waxaa lagu buufin karaa gal nooc kasta ama qaab ee dusha, oo ay ku jiraan meelaha toosan ama dusha.
vs. qallalan isku darka qoyan
T habka uu isku darka engegan ku lug gelinayn maaddooyinka engeganna wuxuu u beddelaa Ayaxaasi ah oo ka dibna u gudbiyo pneumatically dhex tuubo in biiyaha ah. Nozzleman waxay ka talisaa dheer ee biyaha at biiyaha ah. The biyaha iyo isku dar ah oo qalalan ma aha gebi ahaanba isku dhafan, laakiin la dhamaystiro sida ey isku dhufan dusha aqbaliddoodii. Tani waxay u baahan nozzleman xirfad leh, gaar ahaan in ay dhacdo qaybaha qaro weyn ama si xoogan xoojiyay. Faa'iidooyinka hannaanka isku darka qalalan yihiin in content biyaha la ugala beddeli karaa by nozzleman, taasoo u ogolaatay meelaynta intan ka waxtar badan in codsiyada dusha iyo toosan oo aan la isticmaalayo Sheelare. Habka isku dhafka qalalan waa muhiim in codsiyada dayactirka marka waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah la joojiyo, sida wax ku qalalan si fudud laga saaray tuubadu.
shotcrete qoyan-mix ku lug shubto la taaban karo oo ay horay u diyaariyey, caadi ahaan diyaar-isku qasan la taaban karo, in biiyaha ah. hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC waxaa soo bandhigay ee biiyaha si impel isku dar ah u gal dusha aqbaliddoodii. hab-habka qoyan ayaa guud ahaan waxay soo saartaa ku celiska aheyd ka yar, qashinka (marka wax dhaco si dabaqa), oo ciidda marka la barbar dhigo habka qalalan-dhafka ah. Faa'iidada ugu weyn ee habka qoyan-dhafka ah waa maaddooyinka oo dhan lagu qaso biyo iyo daro looga baahan yahay, iyo sidoo kale Muga weyn waxaa lagu qori karaa in waqti ka yar habka qalalan.
S mashiinada hotcrete waxaa laga heli karaa oo la xakameeyo habka complete oo aad u aad u fudud oo degdeg. Hababka Buugga iyo farsamo waxaa loo isticmaalaa habka xereen qoyan laakiin la taaban karo qoyan buufiyaa dhaqan ahaan codsatay by mashiinka. The soo saarka buufiyo sare iyo cross-qaybood oo waaweyn ayaa u baahan shaqo uu ku noqon karo matoorada. Nidaamyada ku xereen la taaban karo oo bambooyin dabaq waxaa badanaa loo isticmaalaa la keegag qoyan shaqeeya. Si ka duwan bambooyin la taaban karo caadiga ah, nidaamyadan baahna inay shardigan buuxiyaan dheeraadka ah ee bixinta socodka a la taaban karo in waa sida joogta ah sida ugu macquulsan, sidaas darteed si joogto ah, in la damaanad qaado codsiga buufiyo dhqaalaha '.